“Momma Boasetɔ Nwie N’adwuma”—Yakobo 1:4 | Adesua
“Momma boasetɔ nwie n’adwuma na moayɛ pɛ adi mũ biribiara mu a hwee nhia mo.”—YAKOBO 1:4.
NNWOM: 135, 139
Dɛn na ɛbɛboa wo ma woanya boasetɔ?
Nnipa bɛn na wɔyɛɛ boasetɔ ho nhwɛso pa?
“Momma boasetɔ nwie n’adwuma.” Saa asɛm no kyerɛ sɛn?
1, 2. (a) Boasetɔ a Gideon ne ne mmarima 300 no daa no adi no, dɛn na yebetumi asua afi mu? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Yɛhwɛ asɛm a ɛwɔ Luka 21:19 a, adɛn nti na yebetumi aka sɛ yehia boasetɔ?
TWA ho mfonini sɛ Israelfo ne wɔn atamfo reko. Ɔtemmufo Gideon di wɔn anim, na ɔko no mu ayɛ den. Anadwo mũ no nyinaa Gideon ne ne mmarima tiw Midianfo no ne wɔn aboafo no. Wotwaa kwan bɛyɛ kilomita 32 (akwansin 20)! Tie nea Bible ka sɛ esii: “Afei Gideon ne mmarima ahasa a wɔka ne ho no beduu Yordan ho na wotwae. Na wɔabrɛ.” Nanso na nkonimdi nnya mmae; na ɛsɛ sɛ wɔko di asraafo 15,000 so. Ná atamfo yi ateetee Israelfo mfe pii, enti na ɛsɛ sɛ Israelfo no kɔ so tiw wɔn. Ne saa nti, Gideon ne ne mmarima no tiw atamfo no kosii sɛ wodii wɔn so nkonim!—Atemmufo 7:22; 8:4, 10, 28.
2 Yɛn nso yegyina akono, na ɔko no mu ayɛ den. Henanom na yɛne wɔn reko? Ɛyɛ Satan, wiase a yɛte mu yi, ne yɛn ankasa sintɔ. Yɛn mu binom fii ase ne saa atamfo yi koe nyɛ nnɛ. Yehowa aboa yɛn ma yɛadi nkonim pii. Nanso, yennya nnii nkonim nwiei. Ɛtɔ da a, na yɛreyɛ apa abaw mpo. Anaasɛ ebia yɛhwɛɛ kwan sɛ wiase bɔne yi bɛba awiei akyɛ. Yesu bɔɔ yɛn kɔkɔ sɛ yebehyia sɔhwɛ ne ɔsɔretia a emu yɛ den wɔ awiei bere yi mu. Nanso, ɔkae sɛ, sɛ yenya boasetɔ a yebedi nkonim. (Kenkan Luka 21:19.) Dɛn ne boasetɔ? Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛanya boasetɔ? Sɛn na wɔn a wonyaa boasetɔ no nhwɛso betumi aboa yɛn? Yɛbɛyɛ dɛn ‘ama boasetɔ awie n’adwuma’?—Yakobo 1:4.
DƐN NE BOASETƆ?
3. Dɛn ne boasetɔ?
3 Sɛnea Bible kyerɛ no, sɛ yegyina ɔhaw anaa sɔhwɛ bi a emu yɛ den ano a, ɛno ara nkyerɛ sɛ yɛwɔ boasetɔ. Boasetɔ kyerɛ adwene a yenya wɔ sɔhwɛ ho ne sɛnea yɛte nka nso. Ɛboa ma yenya akokoduru, yedi nokware, na yenya abotare. Nhoma bi ka sɛ boasetɔ yɛ su a ɛma yenya anidaso a emu yɛ den, ɛmma yɛmpa abaw ntɛm wɔ sɔhwɛ mu. Sɛ sɔhwɛ no te sɛ dɛn koraa a, boasetɔ ma yegyina pintinn a yenhinhim. Ɛmma yɛmfa yɛn adwene nkɔ ɔhaw ne amanehunu a yɛrefa mu no so, na mmom yɛde yɛn adwene si botae no so.
4. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ ɔdɔ na ɛkanyan yɛn ma yɛda boasetɔ adi?
4 Ɔdɔ na ɛkanyan yɛn ma yenya boasetɔ. (Kenkan 1 Korintofo 13:4, 7.) Wɔ nneɛma bɛn mu? Ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa nti, ɔhaw biara a ɔma ho kwan no, yetumi gyina ano. (Luka 22:41, 42) Ɔdɔ nti yenya yɛn nuanom sintɔ ho koma. (1 Petro 4:8) Sɛ yɛdɔ yɛn kunu anaa yɛn yere a, ‘ahohiahia’ a awarefo a wɔwɔ anigye mpo fa mu no, yebegyina ano. Wei bɛma yɛn aware asɔ.—1 Korintofo 7:28.
5. Adɛn nti na Yehowa na ɔfata paa sɛ ɔboa yɛn ma yenya boasetɔ?
5 Ma Yehowa nhyɛ wo den. Yehowa yɛ “Onyankopɔn a ɔma boasetɔ ne awerɛkyekye.” (Romafo 15:5) Ɔno nkutoo na onim yɛn tebea, nea yɛrefa mu, ne yɛn asetena mu nsɛm nyinaa. Ɔno na onim ade pɔtee a ebetumi aboa yɛn ma yɛanya boasetɔ. Bible ka sɛ: “Ɔbɛyɛ wɔn a wosuro no apɛde ama wɔn, na obetie wɔn sufrɛ na wagye wɔn.” (Dwom 145:19) Sɛ yɛbɔ mpae sɛ Onyankopɔn nhyɛ yɛn den mma yennya boasetɔ a, yɛbɛyɛ dɛn ahu sɛ watie?
Yehowa nkutoo na onim yɛn tebea, na ɔno na onim ade pɔtee a ebetumi aboa yɛn ma yɛanya boasetɔ
6. Sɛnea Bible hyɛ yɛn bɔ no, sɛn na Yehowa ma ‘kwan bɛda’ sɔhwɛ a yehyia ho?
6 Sɛ yɛsrɛ Yehowa sɛ ɔmmoa yɛn mma yennyina sɔhwɛ ano a, ɔhyɛ yɛn bɔ sɛ ‘ɔbɛma kwan abɛda ho.’ (Kenkan 1 Korintofo 10:13.) Ɔyɛ no sɛn? Ɛtɔ da a, oyi sɔhwɛ no fi hɔ. Nanso mpɛn pii no, ɔhyɛ yɛn den ma yenya ‘boasetɔ kosi ase na yɛde anigye nya abodwokyɛre.’ (Kolosefo 1:11) Yehowa nim sɛnea yɛte paa; adwenem, ne biribiara mu. Enti biribiara a ɛbɛma ayɛ den sɛ yebedi nokware akosi ase no, ɔremma kwan mma ɛmma yɛn so.
7. Sɛ yebenya boasetɔ a, adɛn nti na yehia honhom fam aduan? Fa mfatoho kyerɛkyerɛ mu.
7 Didi yiye honhom fam fa hyɛ wo gyidi den. Adɛn nti na honhom fam aduan ho hia? Mfatoho bi ni. Bepɔw Everest ne bepɔw a ɛware paa wɔ wiase. Sɛ obi betumi aforo a, anyɛ hwee koraa no, ɛsɛ sɛ da biara odi aduan a nnipa baasa anaa baanan bedi no da koro. Saa pɛpɛɛpɛ na ɛsɛ sɛ yedidi yiye wɔ honhom fam na ama yɛatumi agyinam akosi awiei. Ɛsɛ sɛ yɛyere yɛn ho sua ade na yemia yɛn ani kɔ asafo nhyiam. Wei bɛma yɛn gyidi ayɛ den.—Yohane 6:27.
8, 9. (a) Sɛnea Hiob 2:4, 5 kyerɛ no, sɛ yehyia sɔhwɛ a, na dɛn ho asɛm na asɔre? (b) Sɛ wuhyia sɔhwɛ a, dɛn na wubetumi de w’adwene abu?
8 Mma wo werɛ mmfi sɛ wubedi Yehowa nokware. Sɔhwɛ ma yehu amane, nanso ɛnyɛ amanehunu nko ara na ɛde ba. Ɛsɔ yɛn mũdi mu a yebekura ama Onyankopɔn nso hwɛ. Sɛ yehyia sɔhwɛ a, nea yɛbɛyɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ yegye tom sɛ Yehowa ne amansan hene. Adɛn nti na yɛreka saa? Onyankopɔn tamfo Satan a ɔsɔre tia Yehowa tumidi no kasa tiaa no. Satan kyerɛe sɛ, sɛ nneɛma kɔ yiye ma nnipa a, ɛnna wɔsom Onyankopɔn. Satan kae sɛ: “Nea onipa wɔ nyinaa ɔde bɛma de agye ne kra.” Afei Satan kaa Hiob ho asɛm sɛ: “Sɛ wopɛ a, fa wo nsa ka ne dompe ne ne honam, na hwɛ sɛ ɔrennyina w’anim nnome wo anaa.” (Hiob 2:4, 5) Efi bere a Satan kaa saa asɛm no, wasesa anaa? Dabi, ɔnsesae! Ɛno akyi mfe pii no, wɔtow Satan fii soro baa asase so. Saa bere no nyinaa na ɔda so ara retoto Onyankopɔn asomfo anokwafo ano. (Adiyisɛm 12:10) Yɛrekasa yi, Satan da so ara kyerɛ sɛ, sɛ nneɛma kɔ yiye ma nnipa a, ɛnna wɔsom Onyankopɔn. Ne yam a, anka yɛaka akyerɛ Onyankopɔn sɛ yɛmpɛ sɛ odi yɛn so, na yɛrensom no bio.
9 Sɛ wuhyia sɔhwɛ na worehu amane a, kae sɛ biribi rekɔ so a wuntumi mfa w’ani nhu. Satan ne n’adaemone gyina ɔfã baako. Wɔrehwɛ nea wobɛyɛ, na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ wuntumi mfa kɔtɔ nyɛ nkwan anaa w’abam bebu. Nanso kae sɛ, Yehowa, yɛn hene Yesu Kristo, wɔn a wɔasra wɔn a wɔasɔre afi awufo mu, ne abɔfo mpempem pii nso gyina ɔfã foforo. Wɔn nso hu ɔhaw a worefa mu, nanso wɔrebɔ gye wo so! Wɔn ani gye sɛ wohu sɛ woremia w’ani afa sɔhwɛ no mu, na woredi Yehowa nokware. Afei wote sɛ Yehowa reka kyerɛ wo sɛ: “Me ba, yɛ onyansafo, na ma me koma ntɔ me yam, na manya asɛm abua nea otwa me mpoa.”—Mmebusɛm 27:11.
Yesu hui sɛ boasetɔ so wɔ akatua, enti ɔde n’adwene sii so
10. Yesu de n’adwene sii akatua no so na onyaa boasetɔ. Yɛbɛyɛ dɛn asuasua no?
10 Fa w’adwene si akatua no so. Fa no sɛ woretu kwan, na wobɛkɔ akɔfa kwaebirentuw bi mu. Baabi a wobɛhwɛ biara yɛ sum kabii. Nanso wunim sɛ, wupue fi kwae no mu a, wobɛsan ahu hann. Saa ara na nnipa asetena te. Ɛtɔ mmere bi a wobɛfa ɔhaw mu, na w’adwene betumi atu afra. Ɛbɛyɛ sɛ Yesu mpo tee nka saa. Bere a n’atamfo rebɔ no asɛndua mu no, ɔtee yaw kɛse, na woguu n’anim ase. Ɛbɛyɛ sɛ wei ne amanehunu a ɛsen biara a ɔfaa mu wɔ n’asetena mu! Dɛn na ɛboaa no ma otumi gyinaa mu? Bible ka sɛ ɔhwɛɛ “anigye a na ɛda n’anim.” (Hebrifo 12:2, 3) Yesu hui sɛ boasetɔ so wɔ akatua, enti ɔde n’adwene sii so. Nea ɛsen ne nyinaa no, ohui sɛ sɛ onya boasetɔ a, ɔbɛboa ma Onyankopɔn din ho ate na wakyerɛ sɛ Onyankopɔn tumidi na ɛyɛ papa. Ná onim sɛ ɛrenkyɛ sɔhwɛ no bɛba awiei, na akatua a obenya wɔ soro no de, ɛremfi ne nsa da. Ebia sɔhwɛ a worehyia nnɛ no betumi ama w’adwene atu afra na woadi yaw, nanso kae sɛ ɛrenkyɛ, ne nyinaa to betwa.
“WƆN A WƆAGYINA MU”
11. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yesusuw “wɔn a wɔagyina mu no” asetenam nsɛm ho?
11 Sɛ worefa sɔhwɛ mu a, nnya adwene sɛ wo nko ara na asɛm a ɛte saa ato wo. Satan de sɔhwɛ pii ba Kristofo so. Nea ɛbɛyɛ na Kristofo atumi agyina mu no, ɔsomafo Petro kaa asɛm bi a ɛbɛhyɛ wɔn nkuran. Ɔkyerɛwee sɛ: “Momfa gyidi nnyina hɔ pintinn ne no nni asi, bere a munim sɛ amanehunu koro no ara na wɔde ba mo nuanom a wɔwɔ wiase nyinaa so no.” (1 Petro 5:9) “Wɔn a wɔagyina mu no” asetenam nsɛm betumi aboa ma yɛahu sɛnea yebedi nokware wɔ sɔhwɛ mu. Afei nso, ɛbɛma yɛanya awerɛhyem sɛ yebetumi adi nkonim, na ama yɛakae sɛ, sɛ yedi nokware a, Yehowa behyira yɛn. (Yakobo 5:11) Momma yensusuw wɔn mu kakra ho nhwɛ. —Hwɛ awiei asɛm no.
12. Kerubim a Yehowa de wɔn kɔwɛn Eden no, dɛn na yebetumi asua afi nea wɔyɛe no mu?
12 Kerubim yɛ abɔfo a wɔwɔ dibea kɛse. Adam ne Hawa yɛɛ bɔne akyi no, Yehowa maa kerubim no bi adwuma foforo wɔ asase so. Ná ɛyɛ soronko koraa wɔ adwuma a na wɔyɛ wɔ soro no ho. Nea wɔyɛe no betumi ama yɛanya boasetɔ bere a wɔde adwuma bi a ɛyɛ den ahyɛ yɛn nsa no. Bible ka sɛ, Yehowa de “kerubim ne ogya nkrante a ɛretwa ne ho kɔwɛn ɔkwan a ɛkɔ nkwa dua no ho no ano wɔ Eden turo no apuei fam.”  (Hwɛ awiei asɛm no.) (Genesis 3:24) Bible nka sɛ kerubim no nwiinwii anaa wɔtee nka sɛ adwuma foforo no mfata wɔn. Wɔanka sɛ wɔabrɛ anaa adwuma no afono wɔn. Mmom, wɔkɔɔ so yɛɛ adwuma no kosii sɛ wowiei. Ɛbɛyɛ sɛ wɔn adwuma no baa awiei bere a Nsuyiri no bae no. Wɔde bɛboro mfe 1,600 na ɛyɛɛ adwuma no!
13. Dɛn na ɛmaa Hiob tumi gyinaa sɔhwɛ a emu yɛ den ano?
13 Ɔnokwafo Hiob. Ɛtɔ da a, yɛn adamfo anaa yɛn busuani bi bɛka asɛm bi ma ayɛ yɛn yaw. Anaa ebetumi aba sɛ woyare paa anaa wo yɔnko berɛbo bi wuo nti woredi awerɛhow. Nanso, nea ɛbɛto wo biara no, Hiob asɛm no betumi akyekye wo werɛ. (Hiob 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Ná Hiob nnim nea enti a prɛko pɛ ɔhaw bebrebe yi abɛsoɛ no, nanso wampa abaw. Ɛyɛɛ dɛn na otumi gyinaa mu? Nea edi kan, na ɔdɔ Yehowa, na na ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribi ma Yehowa adi yaw. (Hiob 1:1) Papa mu oo, bɔne mu oo, na Hiob pɛ sɛ ɔyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani. Afei nso, Yehowa kaa nneɛma akɛseakɛse a wayɛ ho asɛm kyerɛɛ Hiob, na ɛboaa no ma ohui sɛ Onyankopɔn wɔ tumi. Wei maa Hiob nyaa awerɛhyem paa sɛ Yehowa bɛma sɔhwɛ a ɔrehyia no aba awiei wɔ bere a ɛsɛ mu. (Hiob 42:1, 2) Na saa pɛpɛɛpɛ na ɛbae. Bible ka sɛ: ‘Yehowa maa Hiob amanehunu no baa awiei, na Yehowa de nea ɛyɛ Hiob de nyinaa bɔɔ ho abien maa no.’ Na Hiob ‘dii nna mee.’—Hiob 42:10, 17.
14. Sɛnea 2 Korintofo 1:6 kyerɛ no, ɔkwan bɛn so na Paulo boasetɔ no boaa afoforo?
14 Ɔsomafo Paulo. Ɛyɛ a nkurɔfo sɔre tia wo denneennen anaa wɔtaa wo? Woyɛ asafo mu panyin anaa ɔmansin sohwɛfo? Dwumadi pii a egu wo so nti wote nka sɛ wutwa wo ho a entwa? Sɛ saa a, ɛnde hwɛ Paulo sua no. Nkurɔfo yɛɛ Paulo ayayade, na daa na asafo ahorow no ho asɛm haw no. (2 Korintofo 11:23-29) Ne nyinaa mu no, Paulo ampa abaw, na nea ɔfaa mu no hyɛɛ afoforo gyidi den. (Kenkan 2 Korintofo 1:6.) Sɛ woda boasetɔ adi a, ɛbɛboa afoforo na sɛ wɔn nso hyia sɔhwɛ a, wɔatumi agyina mu.
WOBƐMA BOASETƆ ‘AWIE N’ADWUMA’ WƆ WO MU?
15, 16. (a) ‘Adwuma’ bɛn na ɛsɛ sɛ boasetɔ wie? (b) Ma nhwɛso fa kyerɛ sɛnea ‘boasetɔ wie n’adwuma.’
15 Onyankopɔn maa osuani Yakobo kyerɛwee sɛ: “Momma boasetɔ nwie n’adwuma na moayɛ pɛ adi mũ biribiara mu a hwee nhia mo.” (Yakobo 1:4) Ɛbɛyɛ dɛn na boasetɔ awie “n’adwuma” wɔ yɛn mu? Sɛ yɛkɔ sɔhwɛ mu a, yebehu sɛ ɛsɛ sɛ yenya abotare, yɛkyerɛ nneɛma ho anisɔ, na yɛda ɔdɔ adi kɛse. Yɛrefa sɔhwɛ mu nyinaa na yɛreda saa su ahorow yi adi kɛse. Sɛ yɛyɛ saa a, Kristofo su a yɛwɔ no betu mpɔn.
Sɛ yegyina sɔhwɛ mu a, Kristofo su a yɛwɔ no betu mpɔn (Hwɛ nkyekyɛm 15, 16)
16 Boasetɔ boa yɛn ma yɛyɛ Kristofo a yedi mũ. Enti sɛ yehyia sɔhwɛ bi a, yɛremmu Yehowa mmara so sɛnea ɛbɛyɛ a sɔhwɛ no to betwa. Nhwɛso bi ni. Sɛ ɔbrasɛe ho adwene regyigye wo a, mfa wo ho nkɔhyɛ mu! Bɔ Yehowa mpae na ka kyerɛ no sɛ ɔmmoa wo mma wunyi w’adwene mfi so. Wo busuani bi resɔre tia wo? Mpa abaw! Si wo bo sɛ wobɛkɔ so asom Yehowa. Woyɛ saa a, Yehowa mu ahotoso a wowɔ no mu bɛyɛ den. Kae sɛ, sɛ Onyankopɔn begye yɛn atom a, gye sɛ yenya boasetɔ.—Romafo 5:3-5; Yakobo 1:12.
17, 18. (a) Ɛsɛ sɛ yegyina mu kodu awiei. Fa mfatoho kyerɛkyerɛ mu. (b) Bere a awiei no rebobɔ ba no, ahotoso bɛn na ɛsɛ sɛ yenya?
17 Ɛsɛ sɛ yegyina mu kodu awiei, na ɛnsɛ sɛ yɛde kɔsõ kwan mu. Yɛmfa ɛhyɛn bi a ɛremem nyɛ nhwɛso. Sɛ hyɛn no mufo benya wɔn ti adidi mu a, ɛsɛ sɛ woguare kɔ mpoano anaa asuogya. Sɛ obi fi ase guare na ɔma n’abam bu a, nsu no bɛfa no. Saa ara na sɛ obi guare na aka kakra ma wadu mpoano anaa asuogya na ɔpa abaw a, nsu no bɛfa no. Enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ wiase foforo no mu a, ehia sɛ yɛkɔ so gyina mu. Momma yensuasua ɔsomafo Paulo. Ɔkae sɛ: “Yɛmpa abaw.”—2 Korintofo 4:1, 16.
18 Yegye di paa sɛ, Yehowa bɛboa yɛn ma yɛagyina mu akodu awiei sɛnea ɔboaa Paulo no. Paulo kyerɛwee sɛ: “Yɛnam nea ɔdɔɔ yɛn no so di nkonim korakora. Na migye di yiye sɛ owu anaa nkwa anaa abɔfo anaa nniso anaa nneɛma a ɛwɔ hɔ anaa nneɛma a ɛrebɛba anaa tumi anaa nea ɛwɔ soro anaa nea ɛwɔ fam anaa abɔde foforo biara rentumi ntew yɛn mfi Onyankopɔn dɔ a ɛwɔ yɛn Awurade Kristo Yesu mu no ho.” (Romafo 8:37-39) Asɛm no ne sɛ, ɛwom ara a yɛbɛbrɛ. Nanso, momma yensuasua Gideon ne ne mmarima no. Wɔbrɛe, nanso wɔampa abaw. Bible ka sɛ: “Wɔkɔɔ so ara tiw wɔn”!—Atemmufo 8:4.
^  (nkyekyɛm 11) Sɛ wokenkan hu sɛnea Onyankopɔn nkurɔfo a ɛwɔ hɔ nnɛ nso agyina sɔhwɛ mu a, ɛbɛhyɛ wo den. Yɛn nuanom a wɔwɔ Ethiopia, Malawi, ne Russia ho nsɛm wɔ Yearbook a edidi so yi mu: 1992, 1999, ne 2008. Sɛ wokenkan a, ɛbɛhyɛ wo nso wo gyidi den.
^  (nkyekyɛm 12) Bible nkyerɛ kerubim dodow a wɔde adwuma yi hyɛɛ wɔn nsa.